DH Flexo printy | Famoahana mpamokatra milina fanontam-pirinty flexo
Label, karazan-taratasy mifintina sy fanodinana matevina
Niorina voalohany tamin'ny taona 1996, DH Flexo Printing Technology Inc. dia lasa mpanamboatra milina fanontam-pirinty farany any Shina.
Taorian'ny fampandrosoana 22 taona, nahomby ny DH dia namoaka endritsoratra avo lenta avo flexo mandrakotra ny tsenan'ny labozia, ny kitapom-bidy ary koa ny fanontam-pirinty matevina. Ny milina rehetra dia natao hanolotra anao ny asa haingana indrindra, ny kalitaon'ny fanontam-pirinty ary ny fako farany ambany.
DH-OFEM Gearless CI flexo print machine
DH-OFEM dia maoderina maoderina amin'ny famoahana ny famokarana avo lenta avo lenta. Izy io dia natsangana tamin'ny fomba fiasa maoderina, miaraka amin'ny fanamafisana ny fitaovam-pandaminana.
DH-ROC tsy misy fitaovana maoderina milina manonta printy
Ny DH-ROC dia endri-tsavolaham-pandaminana amin'ny endriny vita amin'ny flexo amin'ny rafitra tsy misy rafitra. Ny haingam-pampandrosoana dia 450m / min ary manamboatra teknolojia faran'izay haingana toy ny teknolojia rindrina, rafitra tsy misy fiara, fanaraha-maso 100% fanaraha-maso tsara sns.
DH-Kirin dia milina fanontam-pirinty modular natao hanolorana asa haingana. Io no marika safidy tsara indrindra & asa fanontam-pirinty malefaka. Izy io dia azo ampiarahina amin'ireo singa tsy voatery hisafidianana, toy ny fanapahana faty, fanasiana hatsiaka, lamination ary heter sns